कुन उमेरमा बच्चालाई स्मार्टफोन दिने ? – आइसिटी खबर:सूचना सञ्चार तथा प्रविधि खबर ICT Khabar.com : No.1 Tech INFO ICT News Site
Home / आइसिटी इन्फो / कुन उमेरमा बच्चालाई स्मार्टफोन दिने ?
ICT Khabar/आइसिटी खबर October 30, 2018	आइसिटी इन्फो, आइसिटी न्युज/टेक अपडेट, आइसिटी रिपोर्ट Leaveacomment 493 Views
जमना टेक्नोलोजीको छ । अर्थात सूचना-प्रविधिको युगमा हुर्किरहेका छौं हामी । त्यसैले त स्मार्टफोन, ट्याबलेट, ल्यापटपमा अक्सर हाम्रो समय व्यतित भइरहेको हुन्छ । तर, यसको साइड इफेक्ट बच्चाहरुमा छ । उनीहरु पनि हाम्रो सिको गर्दै यस्ता उपकरणमा अभ्यस्त मात्र होइन, लिप्त हुन थालेका छन् । अहिले डेढ, दुई बर्षको बच्चा स्मार्टफोन खेलाइरहेका हुन्छन् ।
कतिलाई यसरी बच्चाले स्मार्टफोन खेलेको रमाइलो लाग्दो हो । उनीहरु सोच्दा हुन्, आफ्नो बच्चा प्रविधिमैत्री भए । प्रविधिमा पोख्त भए ।
कति अभिभावकले आफ्नै सजिलोको लागि बच्चालाई स्मार्टफोनमा भुलाइदिएका छन् । उनीहरुलाई लाग्दो हो, स्मार्टफोन दिएपछि बच्चाले अरु काममा वाधा पुर्‍याउँदैन । तर, बच्चालाई स्मार्टफोन दिनु अभिभावकको निम्ति ठूलो भुल बन्दैछ । किनभने स्मार्टफोनको लतले उनीहरुको मानसिक तथा शारीरिक विकासमा निकै जटिल समस्या थोपर्दैछ ।
के त्यसो भए बच्चालाई स्मार्टफोनबाट अलग राख्नैपर्छ ? त्यो कुरा संभव नहोला । अहिलेको युगमा बालबालिकालाई पूर्णत प्रविधिबाट अलग गर्ने कल्पना गर्न सकिदैन । त्यसो भए बच्चालाई कुन उमेरमा स्मार्टफोन दिने त ?
यस सम्बन्धमा बिल गेट्सको सुझाव उपयोगी हुनसक्छ । माइक्रोसफ्टका मालिक तथा विश्वकै धनाड्य बिल गेट्सले बच्चालाई कुन उमेरमा स्मार्टफोन दिने भन्ने सन्दर्भमा यस्तो सुझाव दिएका छन् ।
गेट्सले १४ बर्षको उमेरमा बच्चालाई दिए मोबाइल
बिल गेट्सले भनेका छन् कि, उनले आफ्नो बच्चालाई १४ बर्षको उमेरसम्म स्मार्टफोन चलाउन दिएनन् । गेट्सका बच्चा जबसम्म हाइस्कुल गएका थिएनन्, त्यस बेलासम्म उसलाई मोबाइल फोन प्रयोग गर्न अनुमति दिइएन । एक रिपोर्टलाई मान्ने हो भने, स्मार्टफोन प्रयोग गर्नका लागि बच्चालाई १० बर्षभन्दा कम उमेर सही होइन । साथै यस रिपोर्टमा के पनि भनिएको छ भने ५० प्रतिशतभन्दा बढी बच्चाले ११ बर्षको उमेरमै आफ्नो फेसबुक र इन्स्टाग्राम एकाउन्ट बनाउँछन् ।
के भन्छन् गेट्स ?
यो अहिले एकदमै आवश्यक छ कि, अभिभावकले बच्चाका लागि स्क्रिन टाइम निर्धारण गर्नुपर्छ । यस कुरामा ध्यान राखौं कि, स्मार्टफोनको कारण बच्चाको निद्रा प्रभावित नहोस् । तर, बच्चालाई त्यसबेलासम्म त्यो काम गर्नका लागि रोक्न सक्दैनौं, जबसम्म हामी रोकिदैनौ । किनभने बच्चाले त्यही गर्ने हो, जो हामी गर्छौं ।
यसको सोझो अर्थ के भने, तपाईले यदी बच्चालाई स्मार्टफोनको लतबाट छुटाउने हो भने तपाईं आफै पनि त्यसको अनावश्यक प्रयोगबाट टाढा रहनुपर्छ । अर्थात आफुलाई उदाहरणको रुपमा पेश गर्नुपर्छ । साथै बच्चालाई निश्चित अवधीका लागि मात्र स्मार्टफोन प्रयोग गर्न दिनुपर्छ ।
Previous फेसबुकमा नयाँ फिचर, सांगीतिक प्रोफाइल बनाउन सकिने
Next अर्को चमत्कार चीनले समाचार पढ्ने कृत्रिम मान्छे तयार गरेको पार्यो